Isa iyo Nintendo DS emulator pane yako iPhone pasina Jailbreak [NDS4iOS] | IPhone nhau
Yakave nguva yakareba kubvira Emulators yeIOS Ivo havaite kuratidzika kwavo nenharaunda, gore rega rega mushure mekuziviswa kwekuparadzwa kwetirongo kweiyo nyowani vhezheni yeIOS, vazhinji vedu takamirira maapplication senge NDS4iOS kana PPSSPP kuti ivandudzwe uye aite anoenderana kuti akwanise kunakidzwa neanogona mudziyo wedu uye zvakanakira nzvimbo dzekuzorora idzo.
Gore rino zvinoita sekudaro zvinhu zvave zvakaoma PPSSPP, Uye nekuda kwemamwe matambudziko ehunyanzvi ane chekuita neshanduko dzemukati muIOS 9 isu tichafanirwa kumirira nemoyo murefu uye nekunamata kuti emulator irarame iyi vhezheni, zvisinei NDS4iOS ichiri kuenderana neIOS 9, uye ikozvino yatora nhanho yekuenderera mberi, uchive unokwanisa kuiisa pasina jailbreak.
Pane dzakawanda nguva pane mapeji akatsaurirwa kununura maapplication akatorwa kubva kuAppStore uye zivisa ivo zvitupa Kuti uiswe paIOS usingapfuure neakakura A, ndiri kutaura nezvayo, semuenzaniso, iyo iEmulators webhusaiti, iyo yakagara iine chokwadi chekubvumira kuiswa kweaya mafomu kubva kuSafari pachayo uye pasina kudikanwa kwejerebreak.
Ino nguva ndeyeIEMEM akatidzosa iyo Nintendo DS uye DSi emulator NDS4iOS, uye nhasi tichatsanangura maitiro ekuiisa.
1 Kuisa dzidziso
2 Mutambo wekutamisa Dzidziso
Kubva pane yedu iOS kifaa isu tinovhura Safari uye tinowana inotevera kero iosem.us/app/install/nds.html
Kana ichi skrini chikaonekwa, tinobaya kuisa nekugamuchira yambiro ichatitaurira "iosem.us iri kuyedza kuisa" nds4ios ""
Dzokera kumba chidzitiro mudziyo wako uye kumirira Anwendung kuisa.
Usati wavhura iyo app, enda kuZvirongwa> Zvakajairika> Maprofiles uye iwe unowana iyo yakaiswa mbiri senge iyo iri mumufananidzo uri pamusoro, tinya pairi.
iOS ichakuratidza ruzivo rwehuwandu kusanganisira iyo app ndeya (nds4iOS), tinya paTrust "iro zita rezita" uye bvuma inotevera meseji.
Iye zvino unenge waiswa app uye zvinokutendera kuti umhanye, zvinongoramba zvichisanganisira maROM, basa rakanga ramboitwa kubva kuapp pachayo asi Nintendo yakakwanisa kubvisa iro basa uye ikozvino zvaitwa kubva paPC kana MAC , isu tinokuratidza maitiro ekuzviita.
Mutambo wekutamisa Dzidziso
Tsvaga internet paROM yaunoda kurodha pasi, hatigone kuisa zvinongedzo sezvo ichityora copyright, asi haifanire kukutora iwe kupfuura kutsvaga kweGoogle.
Zano: Tsvaga rom ne (E) kana Europe muzita kuti uone kuti iri mumutauro wako uye hautore shanduro yeChirungu kana yechiJapanese.
Kana iyo yakadzingwa ROM yakamanikidzwa iva nechokwadi chekuisunungura, unogona kushandisa WinRAR paWindows kana Keka paOS X, iyo inoguma faira inofanira kunge iri ".nds".
Vhura iTunes uye ubatanidze yako iOS chishandiso kuPC yako kana Mac.
Muchikamu cheApplication chakaiswa pane yako iPhone, enda pasi kuti uone izvo zvinotsigira kufambiswa kwefaira, tsvaga uye tinya pa NDS4iOS.
Dhonza iyo ".nds" faira kune iyo runyorwa kurudyi (isina chinhu kana pasina ROM yatotakurwa) uye tarisa pane yako iPhone kuti yakatakurwa nemazvo muNDS4iOS app.
Kana zvese zvikafamba mushe, watove nazvo, izvozvi tanga iyo yaunoda ROM uye unakirwe Nintendo DS mitambo yaunofarira pane yako OS kifaa.
Cherechedza: Zvishandiso chete zvine chipenga cheA7 kana chepamusoro ndizvo zvichakwanisa kumhanyisa mitambo yese yeNintendo DS pa60 fps (iPhone 5s kana yakakwira), iPhone 5 kana zvishandiso zvine A6 chip zvinomhanya mitambo zvinogamuchirwa uye avo vane A5 chip (iPhone 4s, iPod Touch 5G) zvinoenderana nemutambo unenge uri pasi pe20 fps.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Isa iyo Nintendo DS emulator pane yako iPhone pasina Jailbreak [NDS4iOS]
Alejandro Luengo akadaro
xD kana kupenga ini ndinoisa Chinese chitupa cheisingazivikanwe mavambo pane yangu nhare, handei, uye semusimudziri handikurudzire chero munhu kuti azviite.
Pindura kuna Alejandro Luengo
Kutenda nemazano. Asi ndekupi kwaungatambe iyi mitambo yechinyakare?
Luis naMwari tenga DS yaunowana mune rwechipiri ruoko mune yakanaka mamiriro zvirinani
ndine urombo wawana 🙂
Marcos Suarez akadaro
Ini handisi kuwana peji rine makamuri anoshanda 🙁
Pindura Marcos Suárez
Ini handikwanise kukupa chero, ndine hurombo, zvisinei unogona Google «roms nds» uye iwe uchaiwana, zviri nyore 😀
Izvi zvinoita sekupa pasuru yemahara kuti nhare igozadzwa nemavhairasi.
Ini handina zano rakawanda nezve njodzi chaiyo yaunotora nekuisa ichi chitupa. Mumwe munhu anogona kunditsanangurira zvishoma kusarudza kuti oisa here kana kwete?
Ndatenda zvikuru uye kukwazisa!
Mhinduro iyi inoshanda kwauri pamwe neayo maAlexandros maviri pamusoro:
Kuisa chimiro chisinga zivikanwe kwakatangira muIOSI kunoisa njodzi yekuchengetedza, kunyanya zvichienderana nerudzi rwemberi, maprofiles aya anogona kusanganisira mapassword eWi-Fi maratidziro, VPN marongero, zvitupa, marongero ezvekuchengetedza uye zvimwe zvakawanda zvigadzirwa.
Nemhando yakasarudzika yeprofile, unogona kuziva zviri kure maapplication akaiswa pane mudziyo uye imwe data yakatarisana nezvayo, senge muzana rebhatiri nevamwe, unogona zvakare kumisikidza marongero ekuchengetedza (manejimendi repassword kuti uwane mudziyo, zvakadaro izvi hazvigone kuchinjwa, zvinongoda kuti mushandisi azvichinje kubva pachigadzirwa nguva dzese dzeX kana kuve akaomarara pachinzvimbo chePIN), uye kunyangwe kuisa WebClips, mamwe maapplication paSprignboard ari mapfupi kuwebhu.
Izvi ndizvo zvishoma zvekushandisa uye mhando dzemaprofiles aripo, izvozvi, ngatiendererei kumberi iyo inoisa ino webhusaiti iri mubvunzo:
Iyo mbiri yakaiswa neIOSEM.US chitupa chebhizinesi, iyi mbiri inoshandiswa kupa mvumo kuvhurwa kwekushandisa kunze kweAppStore (NDS4iOS mune iyi kesi), mushandisi anogona kuvimba neiyo mbiri uye maapplication akaisirwa chitupa ichi anogona kuurayiwa mu mudziyo usingapfuure neApple chitoro, izvi zvinoreva kuti isu tinokwanisa kuvhura emulator tisina kubvumidzwa neApple uye mamwe ese maapplication akaiswa aine chitupa chimwe chete, hapana chimwezve, izvi hazvivhure musuwo wekuisa mamwe maapplication pasina mvumo yako , zvinongoreva kuti maapplication ese akaisirwa chitupa ichi (kubvumidza kumisikidzwa kwavo nekutambira kubva kuSafari yambiro iyo inokumbira kuisa app) inogona kuurayiwa pane chako kifaa, kubva kuZvirevo> Zvizhinji> Maprofiles> TARGET PROFILE ivo kukwanisa kuzivikanwa kuti ndeapi maapplication akaiswa uchishandisa iyi profiles uyezve kubvisa iyo trust yakapihwa uye kudzima ese maapplication ane iyo.
Ndeapi mhedziso atinotora?
1.Zvakaipa kuisa maprofile kubva kunzvimbo dzisingazivikanwe sezvo zvichireva kuti chero chishandiso chakaiswa neiyi mbiri chinogona kuvhurwa nemushandisi, kunyangwe iine malware.
2. Emulators maapplication ayo Apple isingatsigire muAppStore uye ndosaka vachifanira kushandisa aya mawebhusaiti uye zvitupa izvi kuti zviiswe uye zvishandiswe sepakutanga nehunyanzvi hwekuchinja zuva.
3. Iyi chaiyo profil haifanire kuisa chero njodzi, ini pachangu ndakaisa uye ndine chivimbo uye ndinoshandisa NDS4iOS pasina dambudziko uye ndisina mudziyo wangu uine hunhu husina kujairika (unogona kugara uchirambidza kushandiswa kwedata kubva kuapp iyi semuenzaniso), kana unozvivimba, zviri nyore sekusaisa chero Anwendung kubva kuSafari.
4. Zvinogara zvichikwanisika kudzima ma profiles uye maapplication ane hukama navo kuti awanezve kuchengetedzeka kwataimbova nako.
Ndinovimba ndagadzirisa kusahadzika kwako, kana iyo Actualidad iPhone kana ini handisi basa rekushandisa iro rinogona kupihwa iyi profile, ndati ndave naro uye ndinovimba naro pachigadzirwa changu pasina kunetsekana.
Mario mendoza akadaro
Bro ini handiwane maapplication paTunes, chete iyo yeNetflix chete, chii chandingaite?
Pindura kuna Mario Mendoza
Iyo yakaiswa kwemazuva maviri haichashanduki pairi haishande
Inotendeukira uye kudzima
Pindura kune salpa
Mario, Salpa naBoja, hausi iwe wekutanga kundiudza chimwe chinhu chakadai, pane yangu kifaa ine iOS 9.1 inoramba ichishanda uye iTunes inogamuchira maapplication, zvinoita sekunge hausi iwe wega une dambudziko iri, ndinokurudzira kuti iwe unogara uchichengeta mitambo yako kuti iwe unogona kuzviita kungave paPC kana mugore uye kana ukasawana nzira yekuzviita kana kugadzirisa dambudziko, bvisa chimiro neapp (nekuti izvi hazviite. ndikubatsire mumamiriro ezvinhu aya), ini ndaizokupa imwe mhinduro asi iri iOSEM.US ndiani anogona kuongorora nyaya ...
Zvinoitika kwandiri zvakangofanana. Ini ndanga ndichiita zvakakwana uye ikozvino haandibvumidze kupinda ...
Hi Juan, zvinoitika kwandiri neiyo emulator ndeyekuti ini ndinoiisa zvakanaka kwemazuva maviri, zvese zvakanaka
Asi ipapo pane chete chiratidzo chinosara
Ini handinzwisise zvinoitika
Ndakaedza kuidzima uye kuiisa zvakare uye ini:
«Hatikwanise kudhawunirodha app. Izvozvi haugone kuisa nds4ios »
Zvinotaridza kuti Apple yaivharira ... O_o
Ndine iOS 9.2 uye haina kuisa chero emulator, kana shanduro dzekare, ichave yeiyo nyowani yekushandisa system ye iPhone yangu?
Ini ndangobva kukwidziridzwa kuIOS 9.3 uye haina kundipa sarudzo yemaprofiles.
Izvo hazvitenderi ini kurodha pasi
Zvezdanov (@Zvezdanov) akadaro
Izvo hazvipedze kurodha kwandiri, zvinogara zvichitonhodza ndisati ndapedza uye zvinondikanda iyo meseji "kurodha hakugone kupedziswa izvozvi", izvi zvinondishamisa nekuti neiyo GBA emulator ndanga ndisina matambudziko kuiisa nekuimhanyisa. Pamwe zvakangoerekana zvaitika rombo rakaipa.
Ndingaishandisa sei paIpad, iyo faira inodaro .nds uye ndakaienzanisa neDropbox asi imba yacho hairatidzike mukushandisa
Springtomize 3 kuda kuuya kuCydia yakagadziridzwa kuIOS 9